Sidey u kala baqaan afarta koox ee isugu soo haray Champions League-ga oo maanta loo qori tuuri doono? – Gool FM
Kaafi April 21, 2017
(Nyon) 21 Abriil 2017. Waan haynaa afarteenii ugu dambeysay! Habeenkii arbaca Juventus waxa ay soo reebtay Barcelona halka Monoco ay ka soo gudubtay Borussia Dortmund.
Sidaas waxa ay labadooda ugu biireen afar dhamaadka Champions League-ga oo ay uga sii horreeyeen labada Madrid isku xifaaliya, Atletic iyo Los Blamcos.
Hadaba, khuburro ayaa gorfeeyey afarta soo hartay sida ay u kala baqaan kahor inta aan maanta duhurkii la’isugu beeg begin magaalada Nyon oo uu qori tuurka ka dhacayo.
Iyada oo isha ku haya in ay garaan fiinaalahoodii saddexaad muddo afar sano ah, wiilasha Diego Simeone ma jirto sabab ay qolo uga baqaan, iyaga ayaa ah kuwa lala ordayo. Atletico waxa ay u diyaarsan tahay tii walba oo ku soo aada.
Hase ahaatee, hadii ay cid dooran lahaan oo ayka leexdaan afar dhamaadka waa Real Madrid. Atleti dhawrkii olole ee u dambeeyey waxa ay muujiyeen in ay kulamada maxaliga ah ka saa’id caleeyaan Real, iyaga oo ka qaaday Copa del Rey 2013 halka aysan guuldarro kala kulmin 7 ka mida sidii kulan ee ugu dambeeyey La Liga.
Yeelkeede, Europe wali kuma garaacin, waxa ay guuldarreysteen ciyaar ay sideed dhamaadka 2015 isaga horyimaadeen halka 2014 iyo 2016-na ay siiyeen Champions League.
Marabaan qalbi jab kale.
Waxaa aragtidaas qaba wariyaha Goal.com ee Spain, Ben Hayward.
Kaddib markii ay ka soo taqaluseen Barcelona oo fiinaalihii 2015 ka qaaday, Juventus koox ay ka cabsi qabto kuma jirto saddexda kale, taas waxaa dheer xilli ciyaareedkan oo dhan in kalsoonida Juve ay sii weynaaneysay, waxa ay diyaar u yihiin in ay ku soo laabtaan fikta sare ee Europe.
Iyada oo ay Real tahay kooxda difaaceysa Champions League-ga, hadana, Bianconeri kalsooni ayey ku qabtaa in ay reebi karaan koox ay 2015 ka badiyeen, gaar ahaan xilli daafaca Real Madrid dal dalool badan ka muuqdo. Juventus waxa ay ka wal wal qabaan Monoco.
Waxaa aragtidaas qaba Romeo Agresti, oo ah wariyaha Goal ee Juventus.
Monoco wacdaro ayey ka dhigeen Europe ololahan, walina wey ku raaxeysanayaan waqtiga ay haystan, sidaas awgeed, diiraddaba kuma hayaan qori tuurka dhacaya maaanta. Aad ayey ugu faraxsan yihiin joogidda heerkan iyaga oo raba kartina u leh ka hortagidda cid walba.
Hase ahaatee, Waxaan qabaa in Leonardo Jardim uusan dooneyn in uu fooda daro Juventus, kooxda ugu dheeli tiran inta hartay. Marka la eego sida weerarkooda cajiibka ah ay u kaabayaan diifac aan caadi ahayn, kooxda reer Talyaani naqshad mid ka badan ayey ku ciyaari karaan, arin aan iga dhaadhacsaneyn in kooxaha reer Madrid awoodaan.
Waxaa sidaas qaba wariyaha Ligue 1 ee Goal.com Robin Bairner.
Real Madrid wey ka qaaday labadii Champions League ee iyada ugu dambeeyey Atletico Madrid, laakiin ma rabto in kulan kale oo Madrid Derby ah Europe ka dhaco.
Real Madrid waxaa mar walba dhib ku ah jabinta daafaca dhibta badan ee deriskooda, waana koox aysan uga badin La liga afartii kulan ee ugu dambeeyey Santiago Bernabeu.
Waxaa sidaa qaba wariyaha Gaol ee Real Madrid, Alberto Pinero.
By: Mohamed Kaafi
Waa kuma ciyaaryahanka Bayern Munich ee ay Ronaldo iyo Ramos ku qal qaaliyeen in uu yimaado Real?